Oh.. My Blog!: C!O!N!F!U!S!I!O!N!
ကျွှန်တော့်ဘ၀တွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ နေရာယူပတ်သက်မှု တခုသည် ရောထွေးခြင်းေ၀၀ါးခြင်း ရှုပ်ထွေးခြင်း နှင့် လမ်းကြောင်းများဖြာမှုအား ရွေးရခက်ခြင်း ဖြစ်သော ၎င်း Confusion ပင်ဖြစ်ပါသည်-
လူတို့၏သဘာဝမှာ သိခြင်သည် စူးစမ်းခြင်သည် ထို့ကြောင့် မသိမှုတခုခု နှင့်ကြုံရလျှင် လေ့လာသည် စဉ်းစားသည် မှတ်သားသင့်သည်ကို မှတ်သားသည်- ရိုးစင်းသော ကိစ္စများ အတွက်မူ ရိုးရိုးစင်းစင်း စဉ်းစားယုံ နှင့်ပင် အဖြေထွက်နိုင်ပါသည်- ထို့အပြင် သိပ်မစဉ်းစားသော အခြေနေတွင် ရောက်နေသော လူတယောက်သည် ထိုရောထွေးခြင်းများထဲမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်- အသိပညာ မစုံ၍၎င်း မစဉ်းစားချင်၍၎င်း မှီငြမ်းစဉ်းစားရန် အချက်လက် များများမရှိ၍၎င်း သိပ်စဉ်းစားရန်မလိုသော ကိစ္စတခုဖြစ်နေ၍၎င်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်- ပုံမှန်အားဖြင့်မူ နေ့တဓူဝကိစ္စများသည်လည်း ထိုအတွင်းထဲမှာပင် ပါနိုင်ပါသည်-
သို့သော် ဦးနှောက်ထဲတွင် မှီငြမ်းရန် အချက်အလက်အများအပြား ရှိလာသော အခါ လူတယောက်သည် ကိစ္စတခုကို မြင်ရာ၌ တွက်ချက်မှုမှာ ပိုမိုများပြားလာသည်- တွက်ချက်မှုများလာသောအခါ ရှုထောင့်များလည်း ပိုမိုများပြားလာသည့်အတွက် အဖြေသည် တခုထက်ပိုလာကာ ပြတ်သားစွာ ရွေးချယ်နိုင်မှုသည်ေ၀၀ါးလာသည်- အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တခုနှင့် တခုကွာခြားချက်သိပ်မရှိပဲ ထွက်လာသော ရလာဒ်များကို တွေ့နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်- သို့မဟုတ် မည်သည့်အဖြေကို ရွေးချယ်သင့်သည်ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်- တနည်းအားဖြင့်မူ တွက်ချက်နိုင်မှုကို သိသော်လည်း ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုကိုမူ မသိခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်- ထိုနေရာမှစ၍ Confusion သည် စတင်ပါသည်-
ထိုကိစ္စသည် မည်သည့်အရွယ်မှ စတင်ကာ ကျွှန်တော့်ထံတွင် ရောက်နေလျက်ရှိသည်ကို သေချာမသိသော်လည်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အရမူ ကျွှန်တော့်၏ ပထမဆုံး ဒိုင်ယာရီတွင် မေမေရေးပေးခဲ့သည့် အထက်ပါစာမှ စတင်သည်ဟု ပြောနိုင်သည်- ဖြစ်လာမည့် နောက်ဆုံးအဖြေကို ကြိုတင်တွက်ဆ ပါဆိုသည့်အခါ လက်ရှိအဖြေလား အနာဂတ်အဖြေလား သံသရာအတွက် အဖြေလားဟု ကျနော် ဖြေရှင်းရန်ဆိုပြီး ချရေးထားမိသည်- နောင် တနှစ်ကြာသောအခါ ပထမအရွယ် ဒုတိယအရွယ် တတိယအရွယ် ဆိုသည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ဖြေရှင်းရမည် ကျွှန်တော် အဖြေတွေ့သွားပြီဟု ချရေးထားလိုက်သည်- အဖြေမှန်မဟုတ်သေးပေ-
နောက်ပိုင်းတွင်မူ စဉ်းစားနိုင်လေလေ ဘက်ပေါင်းစုံမှ ရှုထောင့်မျိုးစုံနှင့် ကြုံရလေလေဖြစ်ပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွားပင် ရောထွေးခြင်း သည် ကျွှန်တော့်ထံတွင် တွယ်ကပ်နေတော့သည်- တခါတရံတွင်မူ ၎င်း၏ကောင်းကျိုးများကိုလည်း ခံစားရပါသည်- အဖြေများစွာ၏ အကျိုးကို တွက်ဆနိုင်သောကြောင့် မည်ကဲ့သို့ အဖြေရလာ စေကာမူ အကောင်းဆုံးရှုထောင့် တခုကို လိုရာဆွဲတွေး ခွင့်ရသည်- ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမည့် ကျန်မည့် ရှုထောင့်ကို ပြောင်းပြစ်ခွင့်ရသည်-ထို့ကြောင့် တော်ယုံတန်ယုံ လောကဓံကို မူ ခံနိုင်ရေ ရှိလာသည်- လူတွေအပေါ် ပိုမိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိလာသည်- ဥပမာမြင်အောင်ပြောရလျှင် လွမ်းစရာကို နာစရာနှင့် စဉ်းစားဆိုသလိုမျိုး ဖြစ်သည်- နိမ့်နေလို့စိတ်ပျက်နေရင် ကိုယ့်ထက်ပို နိမ့်သူကို ကြည့်ဆိုသလိုပင်- ထိုအခါ မကောင်းသည်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပါစေ ဆိုသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှု လည်း ၀င်လာသည်- ထိုအခြေနေသည် ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို လျှော့သွားနိုင်သည်- မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဒီကိစ္စကိုလုပ်ရမည် ဆိုသောစိတ်ဓါတ်ကို လျှော့စေသည်- မဟုတ်သည်များကို ကိုယ့်ဟာကို ဟုတ်သည်သတ်မှတ်ကာ ဟုတ်သည်ဟုတွေးသော အတွေးမှားများလည်း တခါတရံ ၀င်လာနိုင်သည်-
လူ့ဘ၀တွင် မစဉ်းစားပဲ နေထိုင်ခြင်းသည် ဘာကိုမျှ ဆင်ခြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပဲ လွန်စွာအကျိုးယုတ် နိုင်ပါသည်- စဉ်းစားခြင်းကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလာဒ်များ တွေ့လာနိုင်သော်လည်း မလိုအပ်ပဲ စဉ်းစားပါက နောက်ကျခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက် မပြတ်သားခြင်း နှင့် ခွန်အားဆုတ်ယုတ်ခြင်း ကဲ့သို့သော ဆိုးကျိုးများလည်း များပြားစွာ ရနိုင်ပါသည်- အဓိကမှာ ချိန်ခွင်ကဲ့သို့ Balance လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကိစ္စတခုခြင်းစီကို လိုက်၍ မည်သို့ကိုင်တွယ် သည့်သည်ကို သိလျှင်မူ အကောင်းဆုံး ရလာဒ်ကို ရနိုင်ပါသည်- မြတ်ဗုဒ္ဓ ဟောကြားခဲ့သော အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်သည် လူသားတို့အတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အသင့်လျှော်ဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပေသည်- ထိုစဉ်းစားနိုင်မှုကို အသုံးချကာ မည်သည့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါစေ ကုသိုလ်ဖြစ်အောင် စဉ်းစားခြင်း နေခြင်း ဖြင့် လက်ရှိအတွက် အနာဂတ်အတွက် သံသရာအတွက်ေ၀၀ါးခြင်းမဟုတ်သော ရောထွေးခြင်းမရှိသော အကျိုးရလာဒ် ကောင်းများကိုရနိုင်ပါသည်-
Posted by Tesla at 3:30 AM